13.11.19 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– बाबाको श्रीमतमा चल्नु नै बाबाको आदर गर्नु हो , मनमतमा चल्नेले अनादर गर्छन्।”
बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! ठीक छ तिमीहरू सबैको सम्पर्कमा आऊ, कुनै पनि नोकरी आदि गर, सम्पर्कमा आउनु पर्छ, रंगीन कपडा लगाउनु पर्छ भने लगाऊ, बाबाले मनाही गर्नुहुन्न। बाबा त केवल निर्देशन दिनुहुन्छ– देह सहित देहका सबै सम्बन्धबाट ममत्व निकालेर मलाई याद गर।
शिवबाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ अर्थात् आफू समान बनाउने पुरुषार्थ गराउनु हुन्छ। जसरी म ज्ञानको सागर हुँ त्यसैगरी बच्चाहरू पनि बनून्। यो त मीठे बच्चेले जानेका छन्– सबै समान बन्दैनन्। पुरुषार्थ त हरेकले आ-आफ्नो गर्नु पर्ने हुन्छ। स्कुलमा विद्यार्थीले त धेरै पढ्छन् तर सबै उस्तै सम्मान सहित पास हुँदैनन्। फेरि पनि टिचरले पुरुषार्थ गराउँछन्। तिमी बच्चाहरूले पनि पुरुषार्थ गर्छौ। बाबा सोध्नुहुन्छ तिमी के बन्छौ? सबैले भन्छन्– हामी आएका हौं नै नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्न। यो त ठीक छ, तर आफ्नो कृयाकलाप पनि हेर। बाबा पनि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। यस्ता बाबालाई कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– शिवबाबा हाम्रा पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा उहाँलाई जान्न पनि मुश्किल छ। पितालाई जानेपछि टिचरपना भुलिन्छ, फेरि गुरुपना भुलिन्छ। बाबाको आदर पनि बच्चाहरूले राख्नुपर्छ। आदर केलाई भनिन्छ? बाबाले जे पढाउनु हुन्छ त्यो राम्रोसँग पढ्छन् अर्थात् आदर गर्छन्। बाबा त धेरै मीठो हुनुहुन्छ। भित्र धेरै खुशीको पारा चढिरहोस्। अपार खुशी रहनु पर्छ। हरेकले आफूसँग सोधोस्– म यस्तो खुशी छु? सबै समान त रहन सक्दैनन्। पढाइमा पनि धेरै फरक छ। ती स्कुलहरूमा पनि कति फरक हुन्छ। त्यहाँ त साधारण टिचरले पढाउँछन्, यहाँ त हुनुहुन्छ असाधारण। यस्तो टिचर कोही हुँदै-हुँदैन। कसैलाई यो थाहा छैन– निराकार पिता, टिचर पनि बन्नुहुन्छ। श्रीकृष्णको नाम दिएका छन् तर उनीहरूलाई थाहै छैन– उनी पिता कसरी हुन सक्छन्। कृष्ण त देवता हुन् नि। हुन त कृष्ण नाम धेरैको हुन्छ। तर कृष्ण भन्ने बित्तिकै तुरुन्त श्रीकृष्ण सामुन्ने आउँछ। उनी त देहधारी हुन् नि। तिमीलाई थाहा छ– यो शरीर उहाँको होइन। स्वयं भन्नुहुन्छ– मैले लोन लिएको छु। पहिला पनि मनुष्य थिए। अहिले पनि मनुष्य हुन्। यी भगवान होइनन्। उहाँ त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई कति रहस्य सम्झाउनु हुन्छ। तर पनि फाइनल पिता सम्झनु, टिचर सम्झनु यो अहिले हुन सक्दैन, घरी-घरी भुल्छन्। देहधारीतर्फ बुद्धि जान्छ। वास्तवमा बाबा, पिता, टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ– यो निश्चय, बुद्धिमा अहिले छैन। अहिले त भुल्छन्। विद्यार्थीले कहिले टिचरलाई भुल्छन् र! होस्टेलमा रहनेले त कहिल्यै भुल्दैनन्। जो विद्यार्थी होस्टेलमा रहन्छन् उनीहरूलाई त पक्का हुन्छ नि। यहाँ त त्यो पनि पक्का निश्चय छैन। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार होस्टेलमा बसेका छन्। त्यसैले अवश्य पनि विद्यार्थी हुन् तर पक्का निश्चय छैन, जानेका छन्– सबैले आ-आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार पद लिइरहेका छन्। त्यस पढाइमा त फेरि पनि कोही बेरिस्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्, डाक्टर बन्छन्। यहाँ त तिमी विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। त्यसैले यस्तो विद्यार्थीको बुद्धि कस्तो हुनुपर्छ। चालचलन, वार्तालाप कस्तो असल हुनुपर्छ।
आफ्नो पुरुषार्थको विधिमा स्वयंको प्रगति अनुभव गर्ने सफलताको सितारा भव
जसले आफ्नो पुरुषार्थको विधिमा स्वयंको प्रगति वा सफलताको अनुभव गर्छ, ऊ नै सफलताको सितारा हो। उसको संकल्पमा स्वयंको पुरुषार्थको बारेमा पनि “थाहा छैन हुन्छ या हुँदैन”, “गर्न सक्छु या सक्दिनँ”– यो असफलताको अंश मात्र पनि हुँदैन। स्वयंप्रति सफलता अधिकारको रूपमा अनुभव गर्ने छ। उसलाई सहज र स्वत: सफलता मिलिरहन्छ।